Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Saint Lucia » Ku Noolow: Saint Lucia waxay ballaarisaa barnaamijkeeda joogitaanka ee la dheereeyey
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Saint Lucia • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Saint Lucia waxay ku martiqaadeysaa booqdayaasha inay u noolaadaan sida maxalliga ah oo leh soo galitaan badan oo cusub ilaa hal sano oo ikhtiyaar ah.
Dalxiiska Saint Lucia wuxuu soo bandhigayaa ikhtiyaar cusub barnaamijka joogitaanka la dheereeyey.
Saint Lucia waxay ku dhiirigelinaysaa dadka socotada ah inay ku dhex milmaan dhaqanka deegaanka.
Ikhtiyaaraadka barnaamijka Saint Lucia's Live it wuxuu ku habboon yahay baahiyaha qoysaska, shaqaalaha fog, millenniyaalka iyo ku dhawaad ​​socotada kasta.
Hay'adda Dalxiiska ee Saint Lucia waxay soo bandhigtay ikhtiyaar cusub barnaamijka joogitaanka dheeraadka ah ee Live it, iyadoo laga jawaabayo isbeddellada safarka iyo baahida macaamiisha. Soo -booqdeyaashu waxay hadda qaadan karaan nolosha Jasiiradda ee Saint Lucia oo leh fiiso galitaan badan illaa hal sano. Iyada oo loo marayo labada ikhtiyaar ee barnaamijka Live it, Saint Lucia waxay ku dhiirri -galineysaa dadka safarka ah inay ku dhex milmaan dhaqanka maxalliga ah, iyagoo sahaminaya quruxda dabiiciga ah ee loo socdo fasaxa joogitaanka ee dheeraadka ah ama meel fog si fudud uga shaqaynaya.
Barnaamijka Saint Lucia's Live it ayaa la soo bandhigay horaantii 2021 -kii oo loogu talagalay booqashooyinka ilaa lix toddobaad. Kuwa raadinaya ikhtiyaarka inay sameeyaan booqashooyin badan oo dherer kasta ah, wajiga labaad ee barnaamijka Live it wuxuu u oggolaanayaa codsadayaasha inay joogaan illaa hal sano oo leh fiiso galitaan badan qiimaha $ 75 USD.
Maamulka Dalxiiska ee Saint Lucia's Ku noolow barnaamijka ikhtiyaarradu waxay ku habboon yihiin baahiyaha qoysaska, shaqaalaha durugsan, millenniyaalka iyo ku dhawaad ​​socdaal kasta. Booqdayaashu waxay si madaxbanaan u qorshayn karaan booqashooyinkooda dheeraadka ah, ama socdaalkooda waxaa lagu daaweyn karaa oo lagu habeyn karaa khabiiro Live It oo u heellan oo abuura waayo -aragnimo ku -meelgaar ah si ay u shaqeeyaan, u ciyaaraan, u seexdaan oo wax u cunaan iyagoo ku habboon raaxaysiga maxalliga ah.
Intii ay ku sugnaayeen Saint Lucia, booqdayaashu waxay uga shaqeyn karaan meel fog si raaxo leh oo la isku halleyn karo, maadaama Wi-fi bilaash ah laga bixiyo jasiiradda oo dhan hoteellada, tuulooyinka, iyo goobaha dadweynaha. Hoteello badan ayaa durba bixiya adeegyo fog fog iyo gunno gaar ah oo ka dhigaysa dheelitirka shaqada iyo fasaxa mid aan kala go 'lahayn. Codsadayaashu waxay ka dooran karaan laba ikhtiyaar waayo -aragnimo dhab ah oo dhab ah:
Waayo-aragnimada Dawaarka La Sameeyay: Si taxaddar leh waxaa u xifdiyey Khabiirada Live It Island, laba booqasho ma wada siman yihiin! Barnaamijka dhex -dhexaadku wuxuu siiyaa booqdayaasha dariiqa ka baxsan waddada la garaacay si ay u sahamiyaan goobaha Saint Lucia iyo meelaha soo jiidashada leh si nabadgelyo leh inta ay ku nool yihiin sida deegaanka. La shaqaynta Khabiirada Jasiiradda Live it oo ay ku jiraan Fasaxyada Barefoot, Fasaxyada Serenity & Tours iyo St. James Travel & Tours, booqdayaashu waxay habayn karaan jadwalka u gaarka ah si ay ugu haboonaadaan baahidooda iyo danahooda.
Si madaxbanaan ugu noolow: Codsadayaashu waxay si toos ah uga codsan karaan Waaxda Socdaalka fiiso galitaan badan leh illaa hal sano iyagoo dhammaystiraya Foomka Codsiga Saint Lucia ugu yaraan (2) toddobaad kahor taariikhda safarka. Codsadayaasha waxaa lagu wargelin doonaa 5 maalmood gudahood haddii arjiga lagu oggolaaday warqad oggolaansho ku meel gaar ah. Lacagta fiisaha waxaa lagu bixinayaa gegida dayuuradaha markay timaado Saint Lucia, oo ay la socoto nuqul daabacan oo ah warqadda oggolaanshaha, si loogu gudbiyo sarkaalka kastamka.